सामाजिक मिडिया मार्केटिंग विफल हुँदैछ | Martech Zone
सामाजिक मिडिया मार्केटिंग असफल भइरहेको छ
बिहीबार, मार्च ० 24, २०२० मंगलवार, नोभेम्बर 29, 2011 Douglas Karr
गत वर्ष, मैले प्रतिक्रियामा एक पोष्ट लेखें जोनाथन सलेम बास्किन, उनको धारणालाई अपवाद गर्दै सामाजिक संजाल हुन सक्छ खतरनाक कम्पनीहरु को लागी। (म वास्तवमा उनीसंग धेरै गणनामा सहमत भएँ)।
यस पटक - मेरो विचारमा - श्री बास्किनले यसलाई ना n्गो बनाए। सबै कम्पनी भएको छ सामाजिक मिडिया ब्यान्डगागन मा जम्प गर्दै, कि अखाडामा मार्केटिंग खर्च बढाउँदै, तर केहिले आफूले आशा गरेको फिर्ती देखिरहेका छन्।
बर्गर कि Facebookले सीएमओ र बर्खास्त एजेन्सी क्रिस्पिन पोर्टर र बोग्स्कीमार्फत फेसबुक अभियानहरू र भाइरल भिडियोहरू उत्पादन गरे पछि धेरै ध्यान दिएका छन र व्यापार लगातार quar चौथाई घट्ने बिक्री देखिएको छ। मार्फत AdAge
सम्मेलनहरूमा र सहकर्मीहरूसँग मैले उनीहरूलाई असंख्य अवसरहरूमा चुनौती दिएँ कि मलाई अकाट्य प्रमाणहरू प्रदान गर्नुहोस् जुन सामाजिक मिडिया अभियानहरू सावधानीपूर्वक डिजाइन, योजनाबद्ध र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ एकसँग अपेक्षित लगानी फिर्ता। यहाँ कुञ्जी छ अपेक्षित... म ईमेलबाट अपेक्षाहरू सेट गर्न सक्छु, प्रति क्लिक भुक्तान र समयको साथ खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन अभियानहरू ... तर कहिले पनि सामाजिक हुँदैन। हामीले सामाजिक साइकसीमा ट्याप गर्न म्याजिक एल्गोरिथ्म फेला पारेनौं।
यो त्यस्तो होइन जस्तो मलाई लाग्दैन मूल्य सामाजिक मिडियामा ... म गर्छु। तर मलाई लाग्छ कि सामाजिक मिडियालाई प्रभावी ढंगले लाभ उठाउनका लागि दुई प्रमुख तत्वहरू छन्:
सामाजिक लाभ उठाउन चाहने कम्पनी पहिले नै सामाजिक हुनुपर्दछ! सबैलाई कुराकानीमा आमन्त्रित गर्दै र त्यसपछि जवाफ नदिने, लुकाउने, वा प्रतिक्रियालाई स्पिन गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो भन्दा बढी हानि पुग्न सक्छ। धेरै, यदि सबै होईन भने, सफल सोशल मिडिया अभियानहरू जुन पन्डितहरू ले लेख्छन् कम्पनीहरूको हो जुन पहिले नै सामाजिक थियो… मध्यमहरू कहिल्यै हिट हुनु अघि।
सामाजिक लाभ उठाउन चाहने कम्पनी एक प्रभावी अनलाइन मार्केटिंग रणनीति हुनुपर्दछ पहिले नै ठाँउमा। त्यो हो, तिनीहरूसँग उत्कृष्ट साइटहरू, ठोस ब्लगहरू, उच्च रूपान्तरण गर्ने अवतरण पृष्ठहरू, उत्कृष्ट खोज इञ्जिन प्राधिकरण र एक प्रभावकारी पोषण ईमेल रणनीति हुनुपर्दछ।
यदि तपाईं प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ लाभ सामाजिक मिडिया तपाइँ प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नु अघि, उदाहरणका लागि, पोषण कार्यक्रम तपाइँले पहिले नै सम्बन्ध बनाइसक्नु भएको र तपाइँको सदस्यता लिने लेड्सलाई बन्द गर्न को लागी एक पोषण कार्यक्रम हो ... तपाई केवल पागल हुनुहुन्छ। स्थापित सम्बन्धको बन्द व्यवसाय गर्न निकै सजिलो छ फेसबुकमा फेन्सी, महँगो अनुप्रयोग फ्याँक्नु भन्दा राम्रो प्रतिक्रियाको आशा र लगानीमा फिर्ताको अपेक्षा गर्नु! (कुखुराको कुखुराले बर्गरहरू बेच्न मद्दत गरेन।)
म विश्वास गर्छु सामाजिक मिडिया एक एम्प्लीफायर हो। जब तपाईं सन्देश विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ - तपाईंसँग पहिले सान्दर्भिक सन्देश हुनुपर्दछ, श्रोताले यसलाई वितरण गर्नको लागि, र ती श्रोताको लागि आउने स्थान। तपाइँ विस्तारित सामाजिक मिडिया प्रोग्राममा पैसा फ्याक गर्न सुरु गर्नु अघि तपाइँको सबै ब्राण्डिंग, इनबाउन्ड मार्केटिंग, खोज इञ्जिन अनुकूलन, र यहाँ सम्म कर्पोरेट ब्लगिging पनि पाउनुहोस्!
म सोशल मीडिया हो भनेर विश्वास गर्दिन मृत एक मार्केटिंग रणनीति को रूप मा ... मलाई लाग्छ कि यो सधैं एक रणनीति को केन्द्र को रूप मा गलत दिशा निर्देशन गरिएको छ जब यो हुनु हुँदैन।
टैग: जोनाथन सेलम बास्किनसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
Disqus: कमेन्टिms सिस्टमको चैम्पियन
इन्डियानामा टेक्नोलोजी ईन्धनको आर्थिक बृद्धि
मार्क्स 24, 2011 मा 5: 11 PM
डगलस, म तपाईंको गहन विश्लेषणसँग अधिक सहमत गर्न सक्दिन। "सन्देश (अझै) सन्देश हो" मध्यम, सही हो?
मार्क्स 24, 2011 मा 5: 19 PM
केही हदसम्म, जोनाथन ... मलाई लाग्छ कि प्रत्येक माध्यमको उनीहरुसंग आबद्ध छ र सन्देश प्राप्तकर्तालाई लक्षित गर्नको लागि सिर्जना गर्नु पर्छ। उदाहरण को लागी, 'पुनःनिर्माण विनिमय आईप्याड किन्नुहोस्' को लागी खोजी हुनु पर्दछ जहाँ व्यक्तिले तुरून्त तुरुन्तै खरीद गर्न सक्दछ ... तर फेसबुक विज्ञापनका लागि सन्देश हुन सक्छ 'iPads वारेन्टीको साथ पुनर्निर्माण हुन्छ'। खोजीको उद्देश्य खरीद गर्नु हो, विज्ञापनको अभिप्रायले केही अप्रत्याशित ध्यानहरू गार्निश गर्नु हो।
उत्कृष्ट लेख! म यी सबै jokers मा 'सगाई' बेच्न मा केहि स्विंग लिन सुरु गर्न एक धमकी नाच को साथ कसैलाई पर्खिरहेको छु। The जब बेरोजगारी उच्च हुन्छ जस्तो देखिन्छ, हामी मार्केटिंग परामर्शदाताहरूको साथ संतृप्त छौं। र जब ती विपणन सल्लाहकारको रूपमा असफल हुन्छन्, हामीले यो नयाँ चीज प्रदान गर्‍यौं जुन 'सोशल मिडिया सल्लाहकार' भनिन्छ।
मार्क्स 24, 2011 मा 8: 26 PM
म त्यो शब्द खोज्दै छु ... एम्पलीफायर। त्यो न nails। सामाजिक मिडिया बजेटहरू ओभरबोर्डमा जानु हुँदैन र त्यहाँ उद्देश्यहरू हुनु पर्छ जुन अर्थपूर्ण हुन्छन्, तर आरओआईको गणना उत्तम रूपमा शंकास्पद हो। म सामाजिक मिडियालाई बेच्ने प्लेटफर्मको रूपमा सोच्दिन र सम्भव कम्पनीहरूले प्रयास गर्दछ कि सानो फिर्ती र थोरै सment्लग्नता। कम्पनीहरु जुन आफ्नो बजार जान्न र आफ्नो बजार मुद्दाहरु बारे कुरा र "सोच नेतृत्व" आदि प्राप्त गर्ने आफ्नो अन्तरिक्ष मा जाने… अर्थपूर्ण ब्रान्ड सचेतना बृद्धि गर्दछ जुन कहिलेकाँही बिक्रीको लागि लाभदायक हुन सक्छ तर सम्भावित भन्दा बढी तिनीहरूलाई निर्णय समयमा प्रभावित गर्दछ।
उदाहरणका लागि जुत्ता कम्पनीहरू हुनेछन् यदि तपाईं ट्विटरमा टोम्स जुत्ताहरू अनुसरण गर्नुहुन्छ र साथै नाइके जुत्ताहरू तपाईले नाइक पोष्टलाई एयर जोर्डन कमबैक जुत्ताको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ केवल $ १०० एक जोडीको लागि र तपाईंले टॉम्स शूज पोष्ट देख्न सक्नुहुन्छ भिन्नताको बारेमा जूताको एक जोडीले गर्न सक्दछ बच्चाको जीवनमा र कसरी तिनीहरू ग्रहमा प्रत्येक जुत्ताको खुट्टामा जुत्ता लगाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन्। जब तपाईं जुत्ता स्टोरमा जानुहुन्छ र एयर जोर्डन कमबैकको छेउमा टोम जुत्ता देख्नुहुन्छ भने कुन कुराकानी दिमागमा आउँछ? मेरो पैसा तपाईं कसैको आधारभूत आवश्यकताहरू कसरी पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे सायद निस्वार्थ वार्तालापमा छ conversation १०० को बारेमा कुराकानी भन्दा अधिक स्थायी प्रभाव पार्न लागिरहेको छ तपाईं teen १००० लाई फेरि किशोरावस्थाको महसुस गराउँदै।
केवल मेरो २
मार्स 25, 2011 मा 10: 31 एएम
धेरै राम्रो ठिक डग्लस, र सही धेरै कम्पनिहरु को लागी।
तपाईंको टुक्रा आश्चर्यजनक ढ fr्गले फन्टहरूको एक संख्या भर फर्म मार्केटि activities गतिविधिहरूको एकीकरणको लागि चलिरहेको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। विशेष गरी इन्टरनेट को लागी, म सम्भावित स्वचालित मार्केटिंग प्रणालीहरु जस्तै हबस्पट प्रस्ताव लाई मन पराउँछु, किनकि उनीहरुले तपाईले उल्लेख गर्नु भएको सबै बिन्दुहरुमा छुन्छ।
मार्स 25, 2011 मा 11: 27 एएम
दर्शकहरूलाई बढी व्यक्तिगत स्तरमा संलग्न गराउन पनि महत्त्वपूर्ण छ, जुन ठूला कम्पनीहरूका लागि गाह्रो हुन सक्छ। तपाईं लाखौं सम्भावित ग्राहकहरूसँग सम्बन्ध कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ? यदि तपाइँ केवल तपाइँको प्रतिस्पर्धीको सट्टामा तपाइँको उत्पादनमा कसरी संलग्न गर्नुहुन्छ, यदि एक मात्र चीजले तपाइँलाई एक अर्काबाट टाढा राख्छ भने मूल्य हो? व्यक्तित्व, र सम्बन्ध। ठूला कम्पनीहरु "विगत" वा "माथिको" सामाजिक मिडिया हुन सक्छ उनीहरूको चुनावको लागि आफ्नो सामाजिक नेटवर्क को उपयोग को अपवाद को साथ, र विशेष बचत सम्झौता जारी। केवल मेरो .02
मार्क्स 25, 2011 मा 6: 24 PM
प्रिय श्री कार,
यो एक त्यस्तो व्यक्तिबाट बोलेको छ जसले कति सामाजिक अभियानहरू गरिरहेका छन्? मलाई अचम्म लाग्छ। म तपाइँको एन्टी-सोशल मिडिया ब्यान्डवागनमा उफ्रने प्रशंसाको लागि गइरहेको छैन। तपाईका सबै सह-हर्ट्सले यसको कुनै पनि अर्थ फेला पार्न सक्दछ कि ती गर्दछन् तर मलाई लाग्छ कि तपाईले गरिरहनु भएको जनसंख्याले के गरिरहेको छ र के तपाई हेर्न चाहानुहुन्छ। जबकि हो सोशल मिडियाले नराम्रो प्रेसलाई जबरजस्ती गर्‍यो: http://bit.ly/bad-press - यो ईमान्दारी राख्ने उपकरणको साधारण कार्य हो।
हो, यो कुरा निश्चित गर्न को लागी सामाजिक मिडिया एक शक्तिशाली उपकरण हो भन्दा backfire भन्दा। र हो, तपाईंले पर्याप्त आत्म-सुरक्षा पोइन्टहरू प्रस्तुत गर्नुभयो जुन तपाईंको पोइन्टमा पूरा प्रतिबद्ध हुँदैन। तर यो कम्बल वक्तव्य आतंक आगो भन्दा बढी केहि छैन।
लाभकारीहरू सामाजिक ग्राफ अझै पनी विज्ञापनदाताहरु र परम्परागत मार्केटरहरु को लागी नयाँ छ। तिनीहरू PUSH, BIG, NOW, बिक्री, निःशुल्क, DANCE बुझ्छन्! र यो केवल "कुराकानीमा संलग्न हुने" होइन यो सन्देश, समुदायको सहभागिता र मेसेजको स्थिरता मार्फत प्राकृतिक ब्रान्ड लिफ्ट बुझ्दछ।
म सहमत छु त्यहाँ असफलताहरु छन्। तर पक्कै पनि अब बढी वा कम परम्परागत माध्यमहरूमा तैनाथ गरियो। ओह र BTW, यो "अधीन कुखुरा" कुखुराको द्वेष छैन र यदि तपाईं अझै पनि यसको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ - यसले काम भन्दा बढी।
मार्क्स 25, 2011 मा 6: 54 PM
वर्तमानमा, हाम्रो सबै ग्राहकहरूको समग्र रणनीतिको अंशको रूपमा सामाजिक संलग्नता छ। साथै, यो मेरो अनलाइन मार्केटिंग रणनीतिको पनि महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। म 'ब्यान्डवागनमा उफ्रिने' होइन। प्रतिभाशाली बजारहरू जसले आफ्नो ग्राहकहरूको लागि परिणामहरू लिनुपर्दछ उनीहरू 'जम्प' गर्दैनन्। हामी कसरी पत्ता लगाउँछौ कि कसरी राम्रोसँग एक माध्यमको लाभ उठाउने बरु कामका अभ्यासहरू छोड्नुभन्दा किनभने वायर्ड वा इंकले 'अर्को ठूलो कुरा' मा औंल्याउँछ।
र अधीनस्थ चिकन एक महाकाव्य असफल थियो - खराब मार्केटिंगको एक उत्कृष्ट उदाहरण। अप्रासंगिक दर्शकहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गर्ने बजार पछि के हुनुपर्दैन।
मार्क्स 25, 2011 मा 7: 51 PM
यो एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया हो, तर तपाइँको मूल कागजात मा प्रतिबिम्बित छैन। र म तपाईंको मूल्यांकनसँग पनि सहमत छु कि हामी मध्यम (हरू) लाई उठाउछौं। केनेथ कोल, ग्रुपन, रेड क्रस, फोर्ड र सबै सफल ब्रान्ड जसले कहिलेसम्म सामाजिक रुपान्तरण गर्‍यो भनेर आरटीमा आत्मविश्वासका साथ कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्‍यो छिटो भन्दा पहिले। तर तपाइँ सहि हुनुहुन्छ त्यहाँ कुनै "जादुई एल्गोरिथ्म" छैन र न त कुनै एकीकृत अभियानमा दिइएको कुनै प्रदर्शनको प्रतिक्रियालाई पूर्व निर्धारित गर्ने कुनै तरिका हुनेछ र तिनीहरूलाई सामाजिक मिडियाको साथ नकारात्मक पास (जस्तो गरी) काट्ने आशा गर्दछ।
त्यसो भए किन सामाजिक विपणन असफल हुँदैछ?
पहिलो million दिनमा १ million लाख हिट भयो
,7,000,000,००,००० प्रसारण प्रभावहरू
450० मिलियन हिट्स
मानिस, म इच्छा गर्छु कि मैले त्यस्तो खराब गर्न सकिन। Playa गर्नुपर्छ घृणा!
मार्क्स 25, 2011 मा 8: 22 PM
यदि छापहरूले तपाईंको बिलहरू भुक्तान गर्न सक्दछ भने, म ठान्दछु यो उत्तम छ! बर्गर किंगका लागि, त्यो मुद्दा थिएन - यसैले अभियानलाई परित्याग गरियो र एजेन्सीले हटायो।
मार्स 29, 2011 मा 1: 38 एएम
यदि सामाजिक मार्केटिंगले तपाईंलाई असफल गरिरहेको छ वा वास्तवमा तपाईंलाई सहयोग गरिरहेको छैन भने कम्तिमा केहि चीज खोज्नुहोस् जुन सामाजिक मिडियालाई बदल्नेछ। स्वचालित प्रणालीहरूको लागि खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई तपाईंको मार्केटिंग रणनीतिमा मद्दत गर्न सक्छ, जस्तो कि मैले एडभ्यान्डवेबड्समा फेला पारेजस्तै। सेवाले असीमित ब्यानर प्रभावहरू र क्लिकहरू प्रदान गर्दछ।